Azerbaijana: Voampanga Ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, বাংলা, polski, English
Toy ny efa nahian'ireo mpanohana azy, ary nandritra ny dinika momba ny raharaha hanenjehana ireo tanora mpikatroka bilaogeran-dahatsary, dia efa nomelohin'ny fitsarana tao Baku, Azerbaijan i Adnan Hajizade sy i Emin Milli.
Naneho hevitra momba ilay didim-pitsarana ny Media Helping Media .
Nandinika ny didim-pitsarana ihany koa ny Flying Carpets and Broken Pipelines ary nilaza fa ” fiandohana ihany izao fa tsy ny fiafarany.”
Nandritra izany fotoana izany, namoaka fanambarana avy hatrany ny Zaikaben'ny Famahanana Bilaogy Manerantany izay voalohany indrindra tany Bucarest, Romania .
Hisy ny fanavaozam-baovao hafa amin'ny fotoana manaraka. Mandritra izany fotoana izany, azonao jerena ao amin'ny fizaran-tantara momba an'i Azerbaijan ato amin'ny Global Voices Online sy ao amin'ny OL! ny fanangonam-baovao feno momba ny fisamborana, ny fitsarana ary ny fanagadrana an'i Adnan Hajizade sy i Emin Milli ! Bilaogy (amin'ny teny Anglisy sy Azeri). Nampiasaina tao amin'ny Twitter ihany koa ny tenirohy #EminAdnan.